> Resource > Lugood > Sidee soo celinta Lugood Library ka iPod
Hello, dhawaan waxaan tirtiray music oo dhan aan ka Lugood, ka dib markii ay taageerto kor u gal DVD. Markii aan u yimaadeen inay u soo celin dhan music ka DVD-yadu waxay dib ugu Lugood, DVD 5aad qalad dhacay, oo waxaan ka sii mid ka mid ah aan music ma ka heli kartaa halkaa. Ma jiraa hab waxaan kuu soo celin karaa dhammaan music hadda on my iPod galay Lugood oo aan la tirtiraa off halkii?
Waa masiibo ah in ay lumiyaan maktabadda Lugood leh wax walba tageen. Haddii aad dareento in careysan oo ku wareersanahay wixii aan la samayn karaa si loo soo celiyo maktabadda Lugood, fadlan joojiya halkan. Halkan yimaado ah Lugood kabashada maktabad qalab - TunesGo Wondershare . Iyada oo ay caawimo, si fudud ka iPod aad u soo celin kartaa maktabadda Lugood leh music, filimada, bandhigyada TV, videos music, podcasts ilaa iyo inta aad hore u badbaadiyey xogta ku saabsan iPod.
Marka aad go'aansato inuu ka soo kabsado maktabadda Lugood ka iPod on Mac, waxaad isku dayi kartaa Wondershare TunesGo (Mac) . Tani version Mac siinaysaa fursad ah inuu ka soo kabsado files music maktabadda Lugood aad.
Download qalab this in ay isku dayaan ka iPod soo celinta maktabadda Lugood.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo taageertaa ka iPod taabashada, isku shaandheeyn lagu iPod, classic iPod iyo nano iPod soo kabsaday maktabadda Lugood. Halkan waa info oo dhan oo ku saabsan dhamaan noocyada iPod taageeray oo taageeray macruufka . Sida Wondershare TunesGo (Mac), waxay kaa caawinaysaa in aad soo celin Lugood maktabadda ka iPod xiriiri 5 iyo iPod xiriiri 4 markii macruufka ay yihiin arrimo cusub 9, macruufka 8, macruufka 7 ama macruufka 5/6. Ka sokow, version MAC kuu ogolaanaysaa inaad ka nano iPod / shaandheeyn / classic soo celin playlists Lugood.
Sida loo soo celiyo Lugood maktabadda ka iPod
Labada qeybood oo si fiican u shaqeeyo. Download version saxda ah. Halkan, waxaan jeclaan lahaa in ay ka hadlaan hab ay u soo celiyaan maktabadda Lugood ka iPod la TunesGo (dadka isticmaala Windows).
Ku rakib oo ay maamulaan TunesGo aad kombuutarka. Markaas, daaqadan soo booda.
Tallaabada 1. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod in kombuutarka
Isticmaal cable USB soo socda aad iPod in la sameeyo xiriir ka dhexeeya iPod iyo PC. Marka iPod waxaa aqoonsan TunesGo, taas Lugood qalab kabashada maktabadda aad ku tusi doonaa suuqa kala sidaan oo kale ah.
Tallaabada 2. Ladnaansho Lugood maktabadda ka iPod
Hab dhakhso ah inuu ka soo kabsado maktabadda Lugood ka iPod waa in guji "Lugood Copy in Lugood"> "Start". Daaqadda pop-up ka, dhammaan faylasha waxaa lagu saxay. Uncheck aad files rabin marka aad rabaa inuu ka soo kabsado files oo la soo doortay. Ka dib markii in, guji "nuqul Lugood".
Sida aad ka arki, qaar ka mid ah isha waxaa lagu muujiyey qaybta bidix. Waxaad sidoo kale riixi kartaa kabsado files mid mid. By gujinaya "Media", waxaad arki doonaa music, filimada, music video, bandhigyada TV, podcasts, Lugood U iyo audiobook on line ugu sareeya. Riix kasta si ay u dhoofiyaan maktabadda Lugood.
Si aad u soo kabsado playlists maktabadda Lugood, waxaad riixi kartaa "playlist" si ay u muujiyaan oo dhan playlists on xaq. Dooro playlists in aad rabto in aad soo kabsadaan oo guji saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in"> "Dhoofinta in Lugood Library".
Cool. Waxaad ayaa ka soo kabsaday maktabadda Lugood ka iPod. Iyo faylasha aad iPod aan la tirtirayaa, ay ka yimaadeen? Hadda, Lugood furan si ay u maareeyaan faylasha waxa ku jira!
Isku day TunesGo in ay isku dayaan ka iPod soo kabsaday maktabadda Lugood.